‘सीईओ भुसाल, पहिले नै सीईओ भएको भए – fukuokanepal.news | सूचना र मनोरंजन को संगालो बोकेको नेपाली समाचार साइट
काठमाडौं ,७ कात्तिक। राजनीतिक चलखेल गर्ने थलो बनेकाले भूकम्पपीडितको पक्षमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको गुनासो आइरहेको बेला सरकारले युवराज भुसाललाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गरेको छ । भुसालले आजबाट आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दैहुनुहुन्छ ।
अनलाइनखबरले मंगलबार बिहान टेलिफोन गर्दा भुसाल कार्यालय जाने हतारोमा हुनुहुन्थ्यो। पूर्वसीईओ सुशील ज्ञवालीलाई पदमुक्त गर्दा पनि प्राधिकरणमा जाने आकांक्षा देखाउनुभएको भुसालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘म पहिले नै सीईओ भएको भए धेरै भूकम्प पीडितलाई टहराको बासबाट मुक्त गराइसक्थें ।
भुसाल भन्नुहुन्छ म पहिलोपटक पुर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्न जाँदैछु । हिजोमात्रै नियुक्ति पाएकाले आजदेखि काम शुरु गर्दैछ । अहिले म अफिस जाने तयारी गरिरहेको छु । तसर्थ पहिले म अहिलेसम्म भएका कामको अपडेट लिनुपर्ने हुन्छ । कर्मचारीहरुसँग बि्रफिङ लिनुपर्छ । त्यसपछि के के काम भएका छन्, के-के बाँकी छन्, त्यसलाई हेरेर योजना बनाएर अघि बढ्छु ।
विगतका सीईओ भन्दा तपाईंको नेतृत्वले के फरक काम गर्नेछ ?
मेरो नियुक्तिलाई राजनीति र नातावादसँग जोडेर प्रचार गरिएको छ अब मैले आफ्नो कामबाट आफूलाई योग्य प्रमाणित गराउने छु ।अहिलेसम्म पनि भूकम्प पीडित जनताले पहिलो किस्ताकै रकम नपाएको गुनासो छ । अढाई वर्ष नाघिसक्दा पनि जनताले किन राहत पाउन सकेनन् ?
यसको कारण खोजेर जनतालाई टहराको बासबाट मुक्त गराउन म प्रतिवद्ध भएर लाग्नेछु । निजी आवाससँगै साँस्कृतिक धरोहर र सार्वजनिक संरचना निर्माणमा पनि तिव्रता ल्याउने छु । यदि म पहिले नै सीईओ भएको भए अहिलेसम्म भूकम्प पीडितलाई टहराको बासबाट मुक्त गराइसक्थेँ ।